Anyị na-egosi gị Samsung Galaxy S6 na vidiyo | Gam akporosis
Dị ka ọ dị na mbụ, ibe m Alfonso nke mkpụrụ osisi na ihe nkesa anyị na-ahụ maka igosi gị ozi niile nke mbipụta a nke MWC. Ma taa anyị bịakwutere Samsung nkwụnye aka ya gosi gi Samsung Galaxy S6 na vidiyo.
Ngwaọrụ na Ọ na-aga ike ekele ya groundbreaking imewe na àgwà kwuchara. Nke ahụ bụ na Samsung na-ahapụ polycarbonate iji aluminom mee ihe na okpokoro nke onye ọhụrụ nke ezinụlọ Galaxy S, na mgbakwunye na iko ahụ na oyi akwa nke Gorilla Glass 4. Ga-atụ uche nyocha anyị banyere Samsung Galaxy S6?
1 Ogo agwụchara na nhazi nke na-akwado akara nke ndị bu ya ụzọ
2 Ike na ezigbo TouchWiz oyi akwa
Ogo agwụchara na nhazi nke na-akwado akara nke ndị bu ya ụzọ
Dịka ị pụrụ ịhụ na vidiyo nke Samsung Galaxy S6, onye na-emepụta Korea ekpebiela ịnọgide na-eme usoro akara nke ndị bu ya ụzọ, obu ezie na ha nwere obere mgbanwe. Anyị nwere ike ikwu na ngwaọrụ a bụ ngwakọta n'etiti Samsung Galaxy S5 na Samsung Galaxy Note 4.
Ihe ndị dị elu nke ejiri rụọ ya na-egosi ịdị mma.papa ma mee Samsung Galaxy S6 nke obi uto nke oma. Na nke a, anyị enweghị ike ịkatọ ọrụ Samsung ma ọlị.
Ike na ezigbo TouchWiz oyi akwa
Samsung ekpebiela iji nyefee ya nlezianya ihu ya. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ uwe na-adị ọcha karị. Ihe akaebe nke a bụ na onye nrụpụta Seoul etinyela naanị ngwa abụọ: S Health na S Voice.
Anyị nwere ike ịhụ nke ahụ na vidiyo ahụ Samsung Galaxy S6 na-arụ ọrụ dị ka akpịrị ịkpọ nkụay data sitere na AnTuTu na-eme ka o doo anya na flagship Korea ọhụrụ ga-enwe ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla na-enweghị nsogbu. Na nkenke, ọnụ dị ike ma nke mechuru m ihu n'akụkụ ụfọdụ.
Iji bido Echere m na nhazi ya na-aga n'ihu bụ mmeghe. Samsung ga-enwerịrị ihe ọhụụ, ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-egosi otu akụkụ ahụ. Ee, ahụrụ m ya n'anya ka ọ gwụchaa, mana ọ ga-abụ otu ụdị anya. Ọzọ okwu bụ price.
Na na aka nke ọzọ enwere okwu nke batrị: ikike nke 2.550 mAh yiri ka ọ dị mkpụmkpụ, kari ma oburu na anyi elebara ngwaike o nwere iji kwado ya anya. Anyị ga-ahụ na nyocha zuru oke ma ọ bụrụ na Samsung enweela ihe ịga nke ọma na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » MWC 2015: Inweta Samsung Galaxy S6 na vidiyo
O nweghi otutu mgbanwe!
Ruben anụ ahụ dijo
otu ihe mkpisi aka mkpisi aka? Ọ bụ otu ihe ahụ S5!
Zaghachi Ruben Vegas
ihe mmetụta ahụ dị iche, ị gaghịzi achọ ịkwaga mkpịsị aka gị ka ọ rụọ ọrụ.